Ahoana ny fomba ahazoana fanampiana amin'ny Windows 10? - Pc
Ahoana ny fomba ahazoana fanampiana amin'ny Windows 10?
Miaraka amin'ny fahaiza-manao vaovao ampiana isaky ny fanavaozana, dia mora ampiasaina ny mahafantatra ny fomba hahazoana fanampiana amin'ny Windows 10. Windows dia iray amin'ireo rafitra miasa be mpampiasa indrindra; noho izany dia misy dikany tsara ny fanaovana fampiharana ho azy ireo 'hahazo fanampiana.'
Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny fomba ahazoana fanampiana / fanampiana amin'ny Windows 10. Fotoana Manier isika, rehefa mampiasa ny haitao farany dia mety mikatona ny rafitrao noho ny fitaovana taloha na antony hafa; te hahafantatra ny fomba hahazoana fanampiana amin'ny Windows 10. Aza manahy. Amin'ity lahatsoratra ity dia handalo ny fomba ahafahantsika mahazo fanampiana amin'ny Windows 10 izahay ary mifantina izay mifanaraka amin'ny olanao.
Ahoana ny fomba ahazoana fanampiana amin'ny Windows 10 - Fomba maro
1. Fanohanana an'i Microsoft
Rehefa tsy mamaly ny baikonao sy ny bibikely hafa ao amin'ny rafitra ny rafitrao dia afaka mitety tranonkala ianao mba hahitana valiny vitsivitsy. Microsoft manana tranonkala fantatra amin'ny anarana hoe https://support.microsoft.com/ . Eto ianao dia hahita ny valinteninao rehetra manomboka amin'ny OS ka hatramin'ny vokatra Microsoft hatramin'ny sisin'ny Microsoft.
Tokony ho afaka hamaha ny olana ianao. Hamarino tsara fa hiditra ao amin'ny kaonty mivantana Microsoft anao hitahiry ireo lesoka rehetra nitranga tao amin'ny rafitranao. Amin'ny tranga ho avy dia sendra olana mitovy amin'izany ianao, afaka hamaha azy ireo mora foana.
Amboary ny Microsoft Minecraft Aka.ms/remoteconnect Error (2020)
2. Makà Application Application amin'ny windows 10
Azonao atao ny misintona ny rindranasa ofisialin'i Microsoft hahitana ny lesoka ao amin'ny rafitra. Solosaina maro no tonga miaraka amina rindrambaiko efa napetraka. Na izany aza, raha manana PC namboarina manokana ianao dia mila maka ilay fampiharana. Izy io dia manana rindrambaiko fanampiana virtoaly izay hitarika anao amin'ireo dingana rehetra hanafoanana ireo olana ateraky ny rafitrao. Azonao atao ny mampita ny olana atrehanao amin'ny alàlan'ny chat, toy ny ataonao amin'ny rindranasa chat hafa.
3. Fanapahana olana
Ity dia afaka manampy anao amin'ny lafiny hardware hafa. Raha tsy afaka mahazo fidirana amin'ny solosainao ny fitaovana iray dia mety hijanona tsy hiasa izany. Eo no idiran'ny programa famahana olana. Ny mpikirakira vahaolana dia manome antoka fa hiaraka ny fitaovana sy ny rindrambaiko ao amin'ny solosaina.
Imbetsaka dia noho ny mpamily no tsy havaozina, izay mitondra any amin'ireo lesoka rehetra ireo. Dingana mora izany; mila tsindrio ilay asa tianao halamina. Mety maharitra iray na roa minitra fa ho voavaha ny olanao.
Ny fomba tsara indrindra hamahana ny olana rehetra dia amin'ny alàlan'ny Youtube. Ny mpampiasa sasany dia tokony nametraka ny torolàlana tsikelikely hitarika anao amin'ny fizotrany. Ity fomba ity dia hanampy amin'ny fijerena horonantsary izay hanampy anao amin'ny fomba tsara kokoa. Afaka manaraka ianao. Na dia nangatsiaka aza ny solosainao dia azonao atao mijery horonantsary amin'ny Youtube amin'ny fitaovana faharoa ary avy eo hamaha ny olana. Hotehirizinao ny vola fanampiny izay azonao laniana amin'ny fanohanana ara-teknika. Ny tombony tsara indrindra amin'ny Youtube dia ny fanampiana omena maimaim-poana sy marina avokoa.
5. hitsin-dàlana lehibe amin'ny fampiharana
Raha eo amin'ny lafiny fampiharana kokoa ny olanao dia azonao atao ny manindry ny bokotra F1 na ny Esc key. F1 dia hamindra anao haingana any amin'ny tranokalan'ny fampiharana. Ny ankamaroan'ny fampiharana Microsoft dia manohana ny fanalahidy F1. Ny fampiasana an'ity lakile ity amin'ny fampiharana Microsoft toa ny excel / word na OneNote dia hanampy anao.
Na izany aza, ny fampiharana hafa dia tsy manohana ny fanalahidy F1; raha izany dia tsara kokoa aminao ny mampiasa ny lakilen'ny Esc. Aorian'ny fanindriana ny bokotra Esc, mizaha mankany amin'ny toerana fanampiana. Jereo ihany koa ny fizarana fanampiana amin'ny kofehy (ny menio); ny fampiharana rehetra dia manana izany.
Rehefa vao manomboka an'ity ianao dia hanampy anao betsaka. Ny rindrambaiko toro-hevitra dia ho an'ireo vao manomboka izay tafahitsoka be ary tsy mahalala hoe aiza no hanombohana. Ity fampiharana ity dia manome ny fisehoana ny fomba fampiasana ny rafitra miasa. Aza hadino ny mamaky an'io alohan'ny manomboka amin'ny OS vaovao. Na izany aza, raha sendra diso fanantenana ianao dia afaka mahita azy ireo eo amin'ny menio fanombohana. Hevero ho toy ny mpitari-dalana kokoa noho ny fanohanana izany. Indraindray dia ny zavatra madinidinika izay mandray anjara amin'ny lesoka lehibe.
Manapa-kevitra hoe iza no tsara indrindra:
Arakaraka ny toe-javatra, ny fitaovana ary ny rindrambaiko no ahafahanao manapa-kevitra hoe iza amin'ireo dingana azonao ampiasaina. Na izany aza, ny Youtube no tsara indrindra amin'ny fikirakirana ny olana roa amin'ny sisiny aloha sy amin'ny sisiny aoriana. Azonao atao koa ny manaraka ny; hanampy anao betsaka izany. YOUTUBE mety ho vahaolana tsara indrindra amin'ny olana rehetra. Ny fomba faharoa tsara indrindra dia ny fampiasana ny fampiharana Tip. Ny fampiharana Tips dia manana fanampiana virtoaly, izay hitarika anao amin'ireo dingana rehetra. Matetika ny olana dia mijanona ao amin'ny fampiharana, noho izany inona no tsara ampiasaina kokoa noho ny app Tips, izay nomen'ny Microsoft.
Ho famaranana, mba hahazoana fanampiana amin'ny Windows 10, misy fomba maro. Na izany aza, ilaina ny misafidy ny fomba mety hahafahanao mamaha ireo olana atrehanao. Hatramin'ny efijery mangatsiaka hatramin'ny fampiharana tsy manomboka dia ho hitanao ny vahaolana. Maniry izahay fa hahazo hevitra momba ny fomba hahazoana fanampiana ao amin'ny Windows 10. Raha nahita informatika ity lahatsoratra ity ianao ary nahazo fomba fijery vitsivitsy dia arotsaho ao anaty boaty fanehoan-kevitra etsy ambany ny eritreritrao.
Mety tianao ihany koa:
Tencent Gaming Buddy ho an'ny Windows 10
Ahoana ny fomba ahazoana ny fihenan'ny mpianatra Windows 10?
Sarimihetsika 50 tsara jerena amin'ny horonan-tsary voalohany
Kilasy famonoana olona vanim-potoana faha-3: voamarina sa nofoanana?
Vanim-potoana faha-2 Ginny & Georgia: Daty Famotsorana: Izay rehetra tokony ho fantatrao!
Miresaka momba an'i Jamie ny Rehetra: Mariho ny Andro Famotsorana azy
Queenpins:- Fantaro ny momba ny tsenambarotra Scam
Daty famoahana Netflix Bling Empire Season 2: Havaozina amin'ny 2022 ve ny Netflix!
Daty famoahana Big Mouth Season 6: Mpilalao, Famerenana & Izay Rehetra Fantatray Hatreto!
Aza adino ny fitsapana lalao Nintendo Switch Sports!
Ahoana ny fomba hampiasana ny fahitalavitra Tubi?
Inona no Fantatrao Momba ny Mpampihavana?
Condor Season 3: Havaozina ve izy io sa hofoanana?
Inona ny Daty Famotsorana an'i Vampire: The Masquerade Bloodlines 2, ary iza no foko azo lalaovina amin'izany?
code psn 20 dolara maimaimpoana tsy misy fanadihadiana
lisitry ny kaody karatra fanomezana amazona
tranonkala tsara indrindra amin'ny Internet
mandefa avy amin'ny varavarankely ka hatrany amin'ny chromecast
ny fomba hijerena fandaharana an-tserasera maimaimpoana
jereo ny zon'ny mpamorona horonan-tsary youtube voasakana
Fialam-Boly Ahoana No Tapakila Accessories Lalao Tolotra Famerenana Softwares App Vpn Pc Lists Fitaovana Ara-Tsosialy Vaovao Ambony Net Worth Harena Madiodio Raharaham-Barotra -Barotra Fampianarana Fanatanjahan-Tena Netflix Kintana Hafa Tech Webseries Toekarena Fresh Ny Hafa Fiantsenana Fiainana Fitiavana Fanomezana Fety Tiktok Metaverse Vaovaon'ny Tapakila
© 2022 | Zo Rehetra Voatokana